Jaaliyado iyo ururuActuellement sélectionné
Miyaa rabtaa inaa kubada cagta bilaawdo, heshid meesha kaniisada ku taal ama makhaayada luqada oo meesha aad degantahay? Miyaa u baahantahay qof aad la hadasho ama caawinaad iyo kaalmeen oo quseeyso adiga ama qoyskaada?
Iswiidhan waxey leedahay nidaam wanaagsan oo nololsha ururada oo degmooyinka meherado kala duwan ku leh, oo meeshaas baa adiga dad cusub ku barankartaa oo isku xiiso tahiin. Adiga waxaa xitaa helikartaa caawinada iyo kaalmeen oo ku saabsan waxyaabaha adiga kugu adag ama qof qoyskaada kamid ah uu caafimaad daro dareemaayo. Dhowr tusaale oo kamid ah ururada iyo isbaheysiyada wadanka ka jiro waxaa kamid ah ururada isboortiga, dhaqamada, waxbarashada iyo diimaha. Kuwaas baa adiga markaa xiriir la yeelatid la kulmi caawinaada casharada, isboortiga iyo dhaq-dhaqaaqyada xilliga firaaqaha la suubiyo, kaalmeenta qoyska iyo makhaayada luqada.
Bisha cas oo Iswiidhan
Bisha cas waa ururka ugu weeyn aduunka markey noqoto caawinaada bina'aadamka. Si fudud aad ula soo xiriirikartid Bisha cas oo Iswiidhan baa ah inaa tagtid goolaha la isku la kulmo oo dhammaan wadanka ku yaal. Meelahas waa meheradooy bulshada lagu caawiyo oo waxey leeyahiin makhaayad, caawinaada casharka, tababarida luqada iswiidhishka, waxbarasho iyo koorsooyin. Haddii adiga ku soo dhaawacantay dagal ama lagu soo silciyay waxaa Bisha cas ka heli rug daryeel oo sagal meel bey wadanka uga yaalaan. Bisha cas waxey xitaa ka shaqeysaa iney caawiso dadka dukumenti la'aanta ah sidey u helaan daryeel iyo xaqooda iney helaan.
Caawinaada bina’aadamka shaqsiga, IM
IM waa urur iswiidhish oo kaalmo dhaqaalo bixiyo oo u halgamo iyo inuu muujiyo faqrinimada iyo kala soocnimada. IM wuxuu siiyaa dumarka, raga, gabdhaha iyo wiilasha fursad in mushtamaca uga qeyb-qaataan. Markii ey xaliyaan kala fognaanshada luqada iyo dhaqamada, ey suubiyaan goobo la isku la kulmo iyo wada hadal iyo caawinaad isla noolanshada, waxey IM badinee fursadaha shaqsiyada bulshada kale kamid eheen. Warbixin kale oo quseyso meheradaha isdhaxgalka oo IM.
Caawinaada bulshada waa urur ka shaqeeyo caawinaada bulshada iyo diin ahaanba. Meheradaheena waxaa kamid ah talo bixinta oo bulshada aan siino/bulshada maskaxiyan caawinaada u baahan iyo magangely'dooninta.
Caritas waa kaniisada oo katooliga qeybta sadaqada oo u shaqeyso dhammaan xaqa iyo wada sinaanshada bina'aadamka. Markey noqoto Iswiidhan Caritas waxey caawisaa dadka gaboobay iyo jiran, talo bixin ka suubisaa arrimaha ku saabsan magangelyo'doonida, ka horetagida dadka la iibiyo (trafficking), caawinaada samafalka iyo wixii la mid ah. Aduunka waxaa caawinaa dadka maasibada ku dhacdo iyo faqrinimada iyo gumeysiga. Anaga waxaa kamid nahay Caritas oo Caalamiga, Caritas oo caalamiga waxey kamid tahay ururada ugu waaweeyn aduunka oo isku keeno 160 ururo qaran oo katoolig ah oo 200 wadamood.
Ururka isbahaystay oo ummada talyaaniga.
Goob meel miyi ah ku taal oo ey dadku ku kulmaan
​Bygdegården waxey dad badan u tahay meel caadi ah oo lagu kulmo. Byggdegården- oo lagu magacaabi karo bygdegård,bystuga,medborgharhus ama wax kale- waa hool guud oo lagu kulmo una furan dadka oo dhan. Carruurta, dhalinyarada,dadka waaweyn, qoyska, ururada, shirkadaha iyo kuwo kale - shardigana yahay diimuquraati.
Goosha samafalka oo caawinaada bulshada
Goosha samafalka oo caawinaada bulshada waa urur isbahaystay oo arrimaha adeega bulshada iyo aqoon kala badalaada iyo abuurista fikradaha. Goosha xubnaheeda waxey ka koobanyihiin 34 urur oo qaranka.
Guddiga kiristiyaanka oo Iswiidhan
Guddiga kiristiyaanka oo Iswiidhan waxaa isku la kulmo kaniisadaha oo kala ah afartaan qoys; Lutherska Kyrkor, Frikyrkor, Romersk-Katolska Kyrkan iyo Ortodoxa Kyrkor. Waxaa ka wada dhaxeeyo dhaqamada kiristiyaanka oo kala duwan. Guddiga kiristiyaanka oo Iswiidhan waxyaabaha ugu mihiim san uu qabto waxaa kamid ah inuu xiriiriyo kaniisadaha urur kamid ah iyo shaqooyinka ey qabtaan. Waxaa suubina kulamo si aan fikradaha u kala badalankarno, wada xiriir u yeelano iyo dhaq-dhaqaaqyo guud u wada suubino.
Guriga bulshada iyo jardiinada
Guriga bulshada iyo jardiinada waa dhaq-dhaqaaq dadweynaha oo xubinta waxeey ka koobantahay 600 ururo oo isku dabo rido Guriga bulshada, jardiinada bulshada iyo xafladaha dhammaan wadanka – dhammaantood waa muhiim iyo waa meelo la jecelyahay iyo dhaqanka xambaarsan. Dhaq-dhaqaaqa dadweynaha waxaa loo kala qeybiyay 7 gobal iyo ururada xubnayaasha ka ah iska leeyahiin 140 shaleemo dhammaan wadanka.
Hey’adda badbaadinta carruurta oo Iswiidhan
Hey'adda badbaadinta carruurta waa urur ka shaqeeyo xuquuqda carruurta oo dhan iyo iney helaan xaqooda, sha qadooduna wacey ku dhisantahay heshiiska caalamiga ah ee carruurta.
Hey’adda degmooyinka iyo gobalada Iswiidhan
Hey'adda degmooyinka iyo gobalada Iswiidhan, SKL, waa urur matalo shaqo bixiyaasha dhammaan degmooyinka, gobalada iyo maamulka gobalada caafimaadka oo Iswiidhan. SKL shaqadooda waxaa waaye iney caawiyaa iyo horumariyaan meheradaha xubintooda. Anaga waxaa nahay isku xiriiriye sidaa aqoonta u kala badalo iyo xiriir isku la yeelano. Anaga shaqadeyna waxaa kamid ah inaa talo bixino su'aalaha quseeyo maamulka degmooyin, caafimaadka iyo gobalada.
IOGT-NTO waa urur caalamka oo dhan ka jiro oo kamid ah ururada dhaq-dhaqaaqa dadweeynaha iyo waxbarashada. IOGT-NTO-wuxuu ka koobanyahay shaqsiyan ka soo horjeedo sarqaanimada oo u wada dadaalaayo iney nolosha u wanaajiyaan dhammaan bulshada.
Isbahaysiga difaaca bulshada
Isbahaysiga difaaca bulshada waa urur loo madax bannaanyahay oo arrimaha difaaca oo taxadarka nololmaalmeedka iyo xaaladaha adag uu ku imaankaro nolosha bulshada. Isbahaysiga difaaca wuxuu tababar siiyaa bulshada wadanka sidey uga warhaayaan waxyaabaha halista, wax qabadka iyo mas'uul qaadida.
Dugsiyada Ururrada taclinta dadka waawayn waxay ka hawlgalaan dalka Iswiidan oo idil. Waana goobaha dalka Iswiidan ugu wayn ee taclin iyo dhaqamada awgood lagu kulmo. Waxaa goobahaas xiriir la yeesho dad da’dooda kala duwan, oo doonaayo in wadajir aqoon-korsadaan iyo horumar. Dhammaan dugsiyada Ururrada taclinta dadka waawayn, waxay hirgeliyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan, kuwaasoo aad ka qaybgeli karto. Tusaale, tababarka luqadaha, goobabinta waxbarashada iyo dhaqdhaqaaqa dhaqamada. Tirada dugsiyada Ururrada taclinta dadka waawayn waa tobban. Mid kasta-na wuxuu leeyahay muqaal iyo fikrad u gaar ah. Warbixin dheeraad ku saabsan ururrada kala xiriir barta internetkooda. Isla barta waxaad ka heli karta dhaqdhaqaaqa ururka ee degmada degan tahay, kaasoo ka qaybgeli karto.
Isbahaysiga ukrainska oo Iswiidhan
Isbahaysiga ukrainska oo Iswiidhan waa 9 urur oo isbahaysteen oo ku kala yaal Göteborg, Stockholm, Trelleborg, Blekinge iyo Gävle oo waxey suubiyaan meherado kala duwan.
Isbahaysiga ururka oo isku dabaridida arrimaha samafalka
Isbahaysiga ururka oo isku dabaridida arrimaha samafalka waa urur samafalaad iyo isbahaysi shaqaalaha samafalka oo Iswiidhan iyo inuu hoggaamiyo shaqooyinka samafalka markey noqoto kuwa degmooyinka iyo samafalka.
Iswiidhan oo dhan waa iney noolaataa
Iswiidhan oo dhan waa iney noolaataa waa urur xubin oo degmooyinka iyo konton urur baa go'aansadeen iney dadaalkooda caawiyaan oo sidaas daraadeed uga ah xubin. Anaga shaqadeyna waxaa waaye in dadka degmooyinka ku nool ey helaan qalabkii ey horumarinta ku suubin lahaayen. Anaga waxaa kale oo nahay urur oo saameyo, oo su'aalaha muhiimka u ah dadka ku noo tuulooyinka faafiyo.
Meherada oo ururka isbahaystay oo samafalka
Meherada-LP waxaa isku daba rido kaniisada oo la dhaho Pingströrelsen iyo shaqadooda baa waxey tahay in laga hortago iyo la caawiyo isticmaalka makhaadaraadka iyo qamriga, oo taas micnaheeda tahay iney bannaanka ka shaqeeyaan, meheradooyin dhallinyarada u suubiyaan, goobyo la iska la xiriiro suubiyaan iyo guryo daryeel iyo fursado daryeel diinta, daawooyin iyo bulsho ahaan.
Ururka Iswiidhishka ee Parasport iyo guddiga Iswiidhishka ee Paralympisk ( Parasport Sverige) waa urur ciyaareed kaasoo iskudubaridaya ciyaaraha dadka ay ku adagtahay dhaqdhaqaaqa, heysta dhaawaca araga iyo dhibaatooyin koriinka ah illaa 18 ciyaaro kala duwan ah. Ururka wuxuu kaloo hogaamiyaa shaqada ah Special Olympics (Ciyaaraha gaarka ah) kaasooo ah diyaar garoow iyo ciyaaro dhaqdhaqaaq oo loogu tala galay dadka heysta caqabadaha koriinka.
Rainbow Sweden waa urur ku dhisan urur madax bannaan o oka shaqeeyo sidii lagu nusqaamin lahaa arrimaha balwada, dambi galida iyo kala soocnimada bulshada. Ururka meheradihiisa waxaa kamid ah daryeelka dadka balwada iyo yareenta muqaadaraadka iyo daryeel balaaran oo baahida shaqsiga loo fiirinaayo.
Ururka isbahaysiga oo dhowro xaqa dadka daboolaha, galmada la suubiyo labada jinsi, dadka jecel labiska jinsiga kale iyo queerka, RFSL, waxey ku leeyahiin ururo dhammaan wadanka oo dhan. RFSL wuxuu ka shaqeeyaa dhowrida xaqa bulshada oo ah daboolaha, galmada la suubiyo labada jinsi iyo dadka jecel labiska jinsiga kale iyo dadka xirto labiska queerka iyo shaqsinimadooda, iney isku xaq lahaan karan, isku fursad iyo waajib oo sida dadka kale camal. RFSL wuxuu xitaa lee yahay urur dhallinyaro, RFSL Ungdom.
Ururka isbahaystay oo caalamiga oo dumarka ajnabiga, RIFFI, waa urur ka kooban 30 urur oo ku yaal dhammaan wadanka. Ururada oo degmooyinka ku yaal waa goobyaal dumarka muhiim u ah dumarka degmooyinkaas ku nool oo la wada shaqeeyaan maamulka degmada iyo ururada waxbarashada sidii loo badiyo isdhexgalka. Ururka wuxuu suubiyaa koorsooyin lagu barto iswiidhishka iyo ingiriska iyo maadooyin kale, tusaale ahaan ka qeyb-qaadashada dimuqraadiga. ​
Ururada oo qoleedyada ku nool Iswiidhan oo isla wada shaqeeyo, SIOS, waa urur samafal oo ka madax bannaan siyaasad iyo diin. SIOS wuxuu ka koobanyahay qoleedyooyinka la aqoonsanyahay iyo kuwa aan la aqoonsaneen oo la wada shaqeynaayo quwadaha Iswiidhan oo rabo dhaqamada kala duwan iyo luqadaha badan, oo shaqadeyna waa inaa ka hadalno arrimaha luqadaha, dhaqanka, waxbarashada iyo qoleedyada kala duwan, oo xubinteena ka wada dhaxeeyo.
Svenska kyrkan waa ururka diinta oo ugu weeyn Iswiidhan iyo wuxuu kamid yahay kaniisada caalamka oo la dhaho Lutherska. Markey qaranka noqoto Svenska Kyrkan weey sii kala qeybsantahay urur diin oo degmo ahaan.
Waa kaniisadaha la dhaho Baptistsamfundet, Metodistkyrkan iyo Missionskyrkan oo isla suubisteen kaniisad cusub, Equmeniakyrkan. Intuu isbadalkaas ka hirgalaayo waxey kaniisadaha la isku dhaho Svenska Missionskyrkan, sida labada urur oo waxbarashada sii ahaanee hal urur oo gooni. Meeshaan baa adiga ka heleysaa warbixin qaas u ah kaniisada la dhaho Svenska Missionskyrkan.
Swiidhish leh canug yar (Svenska med baby)
Urur isbahaystay oo caalamiga oo dumarka
Ururka isbahaystay oo caalamiga oo dumarka oo Nabada iyo Xoriyada, IKFF, waa laan iswiidhish oo kamid ah ururka caalamka oo nabada oo la dhaho Women's International League för Peace and Freedom. IKFF waa urur nabadeed oo muujinaayo xoogta ey dumarka ka lahaan karan siyaasada iyo arrimaha nabadan iyo kalsoonida. Meherada sidii mashruuc ahaan baa la isku daba rida degmooyinka oo Iswiidhan iyo qaranka.
Ururada Iswiidhan ujeedadooda waa iney is kaalmeeyaan iyo xoojiyaan ururada isbahaystiin iyo saameyn ku yeeshaan iyo cod u noqdaan su'aalaha qaranka guud oo quseeyo nolosha ururada.
Ururka dadka guryaha kiraysta
Ururka dadka guryaha kiraysta waa urur dimuqraadi ah oo xubintiisa ah dadka guryaha kiraysta oo wuxu u shaqeeyaa in dhamaan dadka helaan guriga wanaagsan oo qarashkiisa aqligal yahay. Nus malyuun baa ururka dadka guryaha kiraysta kamid ah. Ururka dadka guryaha kiraysta wuxu u shaqeeyaa in dhamaan dadka helaan guriga wanaagsan oo qarashkiisa aqligal yahay.
Ururka isbahaysiga oo shaqalaha samafalka
Ururka isbahaysiga oo shaqalaha samafalka wuxuu ka koobanyahay 85 urur oo shaqadooda tahay iney kormeere ahaadaan, xiriir la lahaadaan dadka aan la wada shaqeyno, wakiil ka ahaadan ururka, qofka lala xiriiro, qoyska lala xiriiro, kaalmeeyaha qoyska, kaalmeeyaha qofka, wakiilka sharciyeysan, maamule, shaqaalaha oo waalidka qaaska iyo booqdo xabsiyada. RFS waxey u shaqqeyaan dadka dhammaan caawinaada u baahan markey noqoto rukun, buukan jiifka iyo maamuluyaasha mas'uulka oo caawinaad uga baahdo shaqaalaha samafal ahaan ku shaqeeyo oo iney caawinaadas noqoto mid taayo sax ah oo la hubo.
Ururka isbahaysiga oo ummada eritrea oo Iswiidhan
Ururka isbahaysiga oo ummada eritrea oo Iswiidhan, Eris; waa urur samafal oo isbahaystay, siyaasad iyo diin ka madax bannaan, waxaa la aasaasay 1987. Eris wuxu u dadaalaa in ummada oo eritrea ey helaan isku xaq oo sida bulshada kale.
Ururka isbahaysiga ummada ciraaq, IRS
Ururka isbahaysiga ummada ciraaq oo Iswiidhan waa urur guud oo Iswiidhan ka dhaxeeyo ururada iswiidhishka iyo ciraaqiinta.
Ururka isbahaysiga ummada kurdida
Ururka isbahaysiga ummada kurdida waa urur ka madax bannaan xisbiyada isyaasada iyo diinta oo urur laga helo dhammaan Iswiidhan baa ka tirsan. Laga mid noqon kara ururka kurdida oo degmada aad ku nooshahay ama degmada u dhaw oo urur noocas laga helo. Siyaasada luqada, siyaasada aqoonsiga shaqsiga iyo siyaasada dhaqanka baa ah waxa wuu ku dhisan yahay meherada ururka.
Ururka isbahaysiga ummadda afrikaan-iswiidhishka
Ururka oo isbahaysiga ummadda afrikaan-iswiidhishka waa urur bina'aadam, dhaqan iyo samafal. Isbahaysiga wuu ka dhax bannaanyahay isyaasad iyo diin, oo maanta wuxuu ka koobanyahay shan gobal oo ku kala yaal Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping iyo Umeå.
Ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed ee Iswiidhan
Ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed ee Iswiidhan (SRFS) waa urur dimuqraadi ah oo ka madax bannaan xisbiyada iyo diinta. SRFS waxa ugu muhiimsan waa bulshada oo iswiidhish-soomaalida oo ku nool Iswiidhan. Ururka wuxu u shaqeeyaa xaqa ummadda iswidhish-soomaalida dimuqraadiyadooda iyo xaqa bina'aadinimada. SRFS wuxu kale ka shaqeeyaa in ummadda iswidhish-soomaalida ey waajibkood garanaayaa oo ah iney daryeelka wadanka ey ka qeyb-qaataan iyo shaqsiyan ey horumar gaaraan.
Ururka isboortiyada oo isbahaysteen
Ururka isboortiyada oo isbahaysteen waxuu isku keenaa ururada isboortiyada iswiidhishka oo wuxuu kaalmeeyaa, matalaa iyo ka shaqeeyaa su'aalaha guud oo ururada isboortiyada ka dhaxeey, markey noqoto qaranka iyo caalamka.
Ururka Magan Welfare
Magan Welfare waa urur aan faa'iido raadineyn oo shaqadiisa tahay inuu dimuqradiyada ku faafiyo wadamada aan eheen dimuqraadiga iyo nolosha bina'aadamka qiimo eysan ka laheen. Ururka wuxuu culeys iska saari xaqa dumarka iyo dhallinyarad qaas ahaan da'daalka wada sinaanshada iy midabtakoorida. Ururka Magan Welfare waxaa laga helaa Göteborg.
Ururka qaranka oo murtida iyo madadaalada
Ururka qaranka oo murtida iyo madadaalada waa dhaq-dhaqaaq dadweeynaha oo waxey iska leeyahaiin riwaayada oo qaranka oo dhan ku wareegto. Xubintooda waxey gaareysaa 40 000, 230 urur oo riwaayadaha, 21 urur oo gobaleed iyo 50 urur oo kale baa kamid ah ururkaan oo dhammaan iswidhaan, oo waxey suubiyaan iyo isku daba rididaan riwaayaadaha.
Ururka waxbarashada oo Bilda
Ururka waxbarashada oo Bilda arrimaha nolosha buu isku mashquuliyaa iyo wuxuu rabaa inuu dhaqamada iyo waxbarashada horumariyo isla kulmida bina'aadamka iyo abuurida fikradaha cusub. Bilda waxey kugu martiqaadi waxbarasha kooxid, koorsooyin, barnaamish hido iyo dhaqan iyo waxbarashooyin kale.
Nolosha bulshada waa magac aan isticmaalno markaa ka hadleyno ururada iyo isbaheysiyada.
Kuwee laga helaa meesha aad adiga Iswiidhan uga nooshahay?
Adiga warbixin dheerad ah oo ururada iyo isbaheysiyada waxaa ka heleysaa qeybta warbixinada gobalada iyo degmooyinka.
Adiga waxaa ka raadinkarta ururada qeybta oo maabka adeega oo degmada.
Tag boogyada oo gobalka iyo degmooyinka
Ururka waxaa isku dabo rido xubna kamid ah iyo in laga mid noqdo waa si fiican oo dad cusub aad ku barankartid.